Izvo zvakanyorwa kuti "Mhepo dzeZima" naGeorge RR Martin? | Zvazvino Zvinyorwa
Izvo zvakanyorwa kuti "Mhepo dzeZima" naGeorge RR Martin?
Joaquin Garcia | | Vanyori, Mabhuku
Zvirokwazvo vazhinji vevateveri veSaga Rwiyo rweChando neMoto vari kushamisika uye vamwe vazhinji havazive kuti bhuku iri chii. Zvekupedzisira izvi, tichaisa kumashure. Saga yezvinyorwa Rwiyo rwechando nemoto iyo saga iyo yakavakirwa pairi iyo yakakurumbira nhevedzano Mutambo weChigaro.
Iyi saga ine mavhoriyamu akati wandei anotaurira nyaya yeWesteros, nyika yakakamurwa pakati pemashiripiti nenyika yepakati, yakafanana naIshe weRings. Munyori wesaga iri, George RR Martin akataura kuti akanamira mune vhoriyamu yekupedzisira yesaga, neVientos de Invierno, vhoriyamu inotarisirwa nemunhu wese asi mushure memakore akati wandei izvozvi, haisati yabuda.
Mhepo dzeZima dzinogona kunyorwa uye kuburitswa pachiitiko chakakosha, handiti?
Mumwedzi yapfuura takanzwa nhau kuti munyori anosungirwa kunyora, kuti haizobude X isati yasvika kana kuti mumwe munyori ari kumubatsira kunyora bhuku iri. Asi chokwadi ndechekuti pachezvangu ndinofunga bhuku racho rinogona kunge rakatonyorwa kare. Mwedzi mishoma yapfuura ivo vakatanga shambadza zvitsauko kana zvidimbu zvebhuku. Parizvino, zvitsauko zviviri zvakatsikiswa uye mumazuva apfuura, George RR Martin akaverenga kuruzhinji ndima yaifungidzira dzinza remumwe wevatambi vakuru. Nekudaro, zvinoita sekunge pane zvakawanda uye zvakanyanya kunyorwa, asi Uye zvakadii nemuparidzi? Zvakanaka nhasi, muparidzi haana kutaura kupokana nezviito zvemutadzi izvo zvinoita kuti mamiriro acho anyanye kunyumwira.
George RR Martin anogona kunyatsoomerera nekuguma kwebhuku, asi zvinogona zvakare kunge kuti munyori akatonyora bhuku iri uye iye nemuparidzi vari kutora mukana wekuiburitsa nenzira dzinoshamisa pasi rese. Uye chokwadi ndechekuti kunyangwe kana ivo vakangoiburitsa muUnited States uye nekutenderera kudiki, Mhepo dzeZima ichave yakakura vhoriyamu kune vateveri vesaga, Zvakanaka, kufambira mberi kwemunyori zvechokwadi hakuzosiya chero munhu asina hanya. Ndinokuvimbisai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Izvo zvakanyorwa kuti "Mhepo dzeZima" naGeorge RR Martin?
Iwe wakapusa uye hauna zano rekufungidzira
Matipi ekuburitsa bhuku